Jamie Bell dia manatevin-daharana an'i Wagner Moura ao amin'ilay andiany "Shining Girls" | Avy amin'ny mac aho
Jamie Bell dia manatevin-daharana an'i Wagner Moura amin'ilay andiany "Shining Girls"
Manuel Alonso | | Apple TV, maro
Ny andian-tsarimihetsika Apple TV + "Shining Girls" vaovao miorina amin'ny tantara nosoratan'i Lauren Beukes, dia hanasongadina mpilalao vaovao manana anarana lehibe hanatevin-daharana an'i Elisabeth Moss efa misy sy Wagner moura. Moss dia hilalao mpanao gazety (Kirby) izay iharan'ny famelezana mahery setra. Moura no hilalao an'i Dan, mpanao gazety manoratra ny fanafihana, ary handray ny andraikitr'i Harper i Bell, olona miafina miafina manana fifandraisana mahagaga amin'i Kirby.
"Shining Girls" dia raisina ho toy ny mampientam-po amin'ny dia an-tongotra metaphysical miorina amin'ny ilay tantara an-tsary mitovy anarana avy amin'ny mpanoratra Lauren Beukes. Ny tantara dia mihodinkodina amin'ny lehilahy tsy manan-kialofana iray avy ao amin'ny Chicago Depression izay nahita lakile mankany amin'ny trano iray izay mihidy amin'ny fotoana samihafa amin'ny tantaran'io tanàna amerikana avaratra io. Na izany aza, raha handeha hamaky ny vavahady ianao dia tsy maintsy mamono vehivavy isan-karazany.
Chicago, 1992. Nilaza izy ireo fa ny tsy mamono anao dia mampatanjaka anao. Lazao amin'i Kirby Mazrachi, izay nivadika ny fiainany taorian'ny fikasana hamono olona tamin-kabibiana. Rehefa sahirana mitady ny manafika azy izy, dia i Dan, izay mpanao gazety famonoana olona teo aloha nitantana ny raharaha ary nitady hiaro azy amin'ny fisavoritahany. Rehefa nandroso tamin'ny fanadihadiana i Kirby dia nahita tovovavy novonoina hafa. Ny porofon'ireo heloka bevava dia… tsy azo atao. Fa ho an'ny zazavavy tokony ho faty, tsy azo atao izany tsy midika hoe mbola tsy nitranga ...
"Shining Girls" no filokana farany an'i Apple miaraka amin'ny Televiziona MRC. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana daty famotsorana isika na fanombohan'ny famokarana aza. Fa ny zavatra toa efa naka inertia ary toa tsy hijanona miaraka amin'ny Fampidirana Jamie Bell. Mpandresy loka BAFTA malaza amin'ny asany amin'ny "Rocketman" na "Billy Elliot" dia handray ny andraikitry ny Harper.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Jamie Bell dia manatevin-daharana an'i Wagner Moura amin'ilay andiany "Shining Girls"
Maninona no tsy miseho amin'ny mailaka ny mailaka rehetra ary manamboatra azy io